Antenimierandoholona : vao manomboka dia ny karama no mahamaika ireo loholona | NewsMada
Antenimierandoholona : vao manomboka dia ny karama no mahamaika ireo loholona
“Izay ataon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) dia ataony, fa amiko: tokony hojerena ny rariny sy ny hitsiny”, hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, tamin’ny fivoriambe nandinihana ny fitsipika anatiny mifehy ny andrimpanjakana tarihiny, eny amin’ny lapan’Anosikely, omaly.
Mba tsy rariny raha handray ny tombontsoany avy hatrany ny birao maharitra, nanomboka ny talata 9 febroary; ireo loholona, mpikambana tsotra, amin’ny talata voalohany amin’ny volana mey amin’ny fivoriana ara-potoana vao mandray ny karamany. “Heveriko fa tsy mety ihany izany, satria be dia be ny asa atao”, hoy izy.
Rehefa tena dinihina aza, angamba, tsy tokony hisy birao maharitra alohan’ny fahavitan’ny fitsipika anaty, raha ny fanazavany. “Aiza ve ka any amin’ny talata faharoan’ny volana mey izay vao heverina fa miditra miasa izy. Inona no tokony hataontsika amin’izany? Fa manalasala toy ny vozon’akoho, araka ny teniko”, hoy ihany izy.
Hadino sahady ny kabary natao
“Ny olona zatra miasa, tsy matahotra mandray andraikitra”, hoy ny kabariny tamin’ny fotoam-panombohana izao fivoriana manokana izao. Inoany fa vonona handray andraikitra avokoa ireo loholona. “Miroso isika ary tsy maintsy mitazona ny fahamendrehana, izay mitaky asa, finiavana, fitiavana, fahatokisana, fanetren-tena, fahamarinana, fahavononana”, hoy izy tamin’izany.
Na inona na inona toerana misy ny tena, ka ananana andraikitra amin-kitsim-po, miasa ho an’ny firenena: misy hatrany fanenjehana mandrivorivo sy ny fanakianana tsy marim-pototra miendrika fanaratsiana, araka ny nambarany ihany. Miantomboka amin’ny mpitondra fototra izany fanenjehana izany, ka hatrany amin’ny faratampony.
Ahoana izany izao raha misy manakiana izao fiadiana tombontsoa izao? Efa nisy nampiaka-peo aza fa tsy tokony handray karama ireo loholona noho ny fandehan’ny fifidianana feno tsy fanarahan-dalàna, ohatra. Tsy araka izay nantenaina sy nampoizin’ny vahoaka azy izao ny fandehan’ny raharaha… Tsy misy resaka ny amin’ny fanarenam-pirenena sy ny fahoriam-bahoaka.